Al-Shabaab oo la wareegay degaan laga xoreeyay todoba sano ka hor | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo la wareegay degaan laga xoreeyay todoba sano ka hor
Kooxda Al-Shabaab ayaa dib u qabsaday degaan laga xoreeyay todobo sano ka hor, kadib markii ay ka baxeen ciidamadii AMISOM iyo kuwii Dowaladda fadaraalka ee ku suganaa.
BARAAWE, Soomaaliya - Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya in degaan xeebeedka Marin gubaay oo hoos taga degmada Baraawe ay la wareegeen Kooxda Al-Shabaab, kadib markii ay saaka ka baxeen ciidamadii AMISOM ee ku sugnaa degaanka.
Sida ay sheegayaan dadka degaanka Ciidamadii Uganda ee ku sugnaa Marin gubaay, ayaa ku wargaliyay in ay ka baxayaan tuulada labo maalin ka hor, taas oo sababtay in ay Al-Shabaab kaabiga ku soo qabtaan degaanka, isla-markaana ay dagaal la’aan ku soo galaan wax ka yar hal saac markii ay baxday AMISOM.
Degaanka Marin Gubaay oo qiyaasti 40KM u jira xarunta rasmiga ah ee Maamulka Koofur galbeed ee Baraawe ayaa muhiim u ah isku xirka Buulo Mareer iyo Baraawe, waxayna istaraatiijayad gaar ah uga fadhisaa Al-Shabaab oo horaba dhibaato ugu hayay isku socodka labada maagalo.
Weerarrada dhabo-gal ah ee Al-Shabaab geystaan oo maalmihii la soo dhaafay aad u kordhay ayaa sababay in ay AMISOM, ka guurto Marin Gubaay, mana ahan markii koobad oo ay baneeyaan degaanno dhaca agagaarka Baraawe, waxayna hore u soo banneeyeen deggaano badan sida Rasdaay, Roobow iyo kuwo kale.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa inta badan raaca AMISOM, marka ay degaannada faarujineyso, iyaga oo ka cabsi qaba in ay la kulmaan duulaan adag oo ka yimaad Al-Shabaab.
Degaanka Marin Gubaay ayaa ka mid ah dhulkii ballaarnaa ee Dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh ku xoreysay howlgalkii Badweynta Hindiya, ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab bishii October 2014.